नेपाली श्रमिकका लागि बहराइन खुल्यो, कस्ता व्यक्ति जान पाउँछन् ? - jagritikhabar.com
नेपाली श्रमिकका लागि बहराइन खुल्यो, कस्ता व्यक्ति जान पाउँछन् ?
बहराइनले नेपाली श्रमिकको यात्रामाथि लगाएको प्र’तिबन्ध हटाउने भएको छ । बहराइनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बहराइनले गएको शनिबारको रातिदेखि नेपाललाई राबतो सूचीबाट हटाउँदै नेपालीको आवागमन खुला गरेको हो ।
बहराइन सरकारको यो निर्णयसँगै अब नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि बहराइन जान पाउनेछन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुुएचओ)ले मान्यता दिएको को”रोनावि”रुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाएका बहराइन पुगेपछि क्वारेन्टाइन बस्न पर्दैन ।
बहराइन यात्रा गर्ने यात्रुले साथमा क्यूआर कोडसहितको अङ्ग्रेजी भाषामा जारी खोप प्रमाणपत्र अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ ।
खोप नलगाएका वा एक मात्रा मात्र लगाएका यात्रुले भने त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो बसोबास भएकै ठाउँमा वा बहराइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा १० दिन क्वा’रेन्टाइनमा बस्नुपर्छ ।
खोप लगाएका र खोप नलगाएका दुवै यात्रुले बहराइन पुगेपछि विमानस्थलमा र पाँचौँ तथा दसौँ दिनमा पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । एपमार्फत पीसीआर परीक्षणका लागि समय लिनुपर्छ ।
मलेसियामा छापा, सयौं ईलिगल कामदार पक्राउ !
गए रति १ बजे मलेशिया इमिग्रेशन ले कुवलालम्पुर को जलान सुलतान सुलेमान मा छापा मरेको छ। छापा सयौं अवैध आप्रवासीहरू पक्राउ परेका छन् । क्वालालम्पुर संघीय क्षेत्र अध्यागमन निर्देशक स्यामसुल बद्रिन मोहसिनले मध्यरात करिब १२ः१० बजे सुरु भएको उक्त अपरेसनमा करिब १ सय ५० व्यक्तिको चेकजाँच गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“निरीक्षणको नतिजाको रूपमा, अवैध कागजातहरू, कुनै कार्य अनुमति र कुनै प्रत्यक्ष यात्रा कागजातहरू नभएका कुल ९५ अवैध आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा लिइयो। ‘हिरासतमा रहेकामा ५२ पुरुष र ४३ महिला रहेका छन्, जसमा अधिकांश इन्डोनेसियाली, बंगलादेशी, म्यानमार, १९ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका नेपाली र पाकिस्तानी छन्,’ बुधबार अपरेशन स्थलमा भेट्दा उनले भने ।
श्यामसुल बद्रिनले भने कि त्यहाँ अवैध आप्रवासीहरू छतमा लुक्न खोजिरहेका थिए, र तिनीहरूमध्ये अधिकांशले छापा मार्ने टोलीबाट पक्राउ हुनबाट बच्न कोठाको ढोका खोल्न अस्वीकार गरे। स्थितिले छापा मार्ने टोलीलाई फलामको ग्रिलमा आँप काट्न कटरको प्रयोग गरेर ढोका तोड्न बाध्य पारेको उनले बताए ।
थप टिप्पणी गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गरेको र त्यहाँ धेरैजसो विदेशीले निर्माण मजदुर र सरसफाई मजदुरको रूपमा काम गरेको पाइएको बताए । साँघुरो र सानो कोठाका रूपमा काठ प्रयोग गरी परिमार्जन गरिएको परिसरको अवस्थाले आगलागी हुँदा सबै बासिन्दा जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।
“एउटा घरमा पाँचभन्दा बढी कोठा अवैध आप्रवासीहरूलाई भाडामा दिइएको छ र विद्युतीय तार र पाइप जडानहरू ठीकसँग जडान गरिएको छैन। उनका अनुसार उनको पार्टीले संलग्न परिसरको मालिकको पहिचान गर्नेछ र अवैध आप्रवासीहरूलाई संरक्षण गर्ने तत्व भएमा छानबिन गर्नेछ ।